Doorashada Jubbaland Oo Khilaaf Ka Dhex Abuurtay Baarlamaanka Somaliya. | Baligubadlemedia.com
Doorashada Jubbaland Oo Khilaaf Ka Dhex Abuurtay Baarlamaanka Somaliya.
August 20, 2019 - Written by admin
Maalmihii lasoo dhaafay waxaa si isdaba joog ah usoo baxayay fikradaha kala duwan
ee laga qabo hannaanka doorashada maamul goboleedka Jubbaland oo hadda mareysa marxaladihii ugu dambeeyay.
Maalmo ka hor waxaa la dhisay baarlamaanka maamulkaas iyo guddoonkiisa, iyadoo maalmaha soo socdana la filayo inay dhacdo doorashada madaxweynaha.
Balse wuxuu wali muran xooggan ka taagan yahay hannaanka loo maray xulistii xildhibaannada, doorashadii guddoomiyaha baarlamaanka Jubbaland iyo ku xigeennadiisa iyo sidoo kale qaban qaabada doorashada madaxweynaha qudheeda.
Xukumadda Federaalka ayaa gabi ahaanba ku gacan seyrtay howsha, halka guddiga doorashada Jubbaland ay ku adkeysteen inay u hoggaansameen dhammaan xeerarkii ku xusnaa dastuurka qaranka.
Sidoo kale waxaan habka doorashada loo marayo ku qanacsaneyn Qaramada Midoobay.
Wakiilka xog hayaha guud ee qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan iyo guddoomiyaha guddiga doorashada Jubbalan Xamsa Cabdi ayaa is dhaafsaday warqado muujinaya ismaandhaafkooda.
Laakiin intaasoo dhan ka sokow, xildhibaannada baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ee kasoo jeeda Jubbaland ayaa u muuqda inay ku kala qeybsan yihiin hannaanka doorashada Jubbaland.
Qaar ka mid ah mudaneyaasha labada gole ee aqalka hoose iyo aqalka sare ayaa goob joog u ahaa doorashadii guddoonka baarlamaanka iyo xulista xildhibaannada maamulka Jubbaland, waxayna la dhacsan yihiin shaqada uu hayo guddiga doorashada ee uu madaxa ka yahay Xamsa Cabdi Cumar.
Hase yeeshee, xildhibaanno kale oo heerka Federaalka ah ayaa qaba fikir gabi ahaanka ka duwan kaas.
Laanta Af-Soomaaliga ee BBC-da ayey u suurta gashay inay labada dhinacba ra’yigooda hesho, waxayna caddeeyeen inay kala taageersan yihiin maamul goboleedka Jubbaland iyo dowladda Federaalka.
Xildhibaannada garab taagan guddiga Doorashada Jubbaland
Mudaneyaal ka tirsan baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ay maanta soo saareen ku sheegay in guddiga doorashada dowlad goboleedka Jubbaland iyo hannaanka ay doorashada u wadaanba yihiin kuwo sharciga heer federaal iyo mid gobolba waafaqsan.
Waxay sidoo kale ku sheegeen in aanay iyaga u muuqanin tallaabooyin sharciga baalmarsan oo ay guddiga qaadeen.
Xukuumadda Federaalka ayey ku eedeeyeen inay dalal “dariska ah ka codsatay inay faragaliyaan doorashada Jubbaland, oo ay cadaadis saaraan maamul goboleedkaasi”, taasoo ay “xad gudub” ku tilmaameen.
Xildhibaan Yuusuf Xuseen Gama’diid, oo ka tirsan xildhibaannada war-saxaafadeedka soo saaray ayaa BBC-da uga warramay waxa ay ku saleeyeen aragtidooda.
“Doorashadii guddoomiyaha baarlamaanka Jubbaland ee aan goob joogga u ahayn waxay u dhacday si xor iyo xalaal ah, qaabkii ay wax u socdeenna aad buu u wanaagsanaa, ilaa hadda si wanaagsan ayuu u socdaa hannaanka. Warsaxaafadeedkeenna waxaan ku sheegnay inaan aragno faragalin toos ah oo ay dowladda Federaalka ku heyso maamul goboleedkan. Waxay kasoo hor jeedaan xaqa uu dastuurka siiyay maamulkan waxayna wataan dano gaar ah, in maamulkan la kala diro ayeyna rabaan”, ayuu yiri.
Mudanahan ayaa sheegay inay qirsan yihiin tabashada jirta ee ka dhanka ah sida loo wado howsha doorashada.
“Waa xaqiiq inay jiraan odayaasha qaar oo wax tabanaya, laakiin annagu waxaan nahay xildhibaanno, waxaan ka soconnaa baalamaanka Federaalka Soomaaliya, waxaan ognahay inuu halkan ka dhisnaa maamul xubin ka ah dowladda Federaalka, oo dhammaan hay’adihiisa nidaamkana ay u dhammeystiran yihiin, xaqna u leh inay iyagu dajistaan dhammaan hab raacyada loo marayo doorashooyinka, sida uu u oggol yahay dastuurka kumeel gaarka ah, dastuurkooda gaarka ah uu fasax u siiyay, marka hab raacyadii uu maamulkan dajiyay ayaan annagu aaminsan nahay in dowladnimo loo fiiriyo oo la garab istaago”, ayuu yiri xildhibaan Gama’diid.
Muxuu yahay fikirka Xildhibaannada kasoo horjeeda hanaanka doorashada Jubbaland?
Xildhibaan Maxamuud Cali Magan oo xubin ka ah baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa qaba in qodobbada ay war-saxaafadeedka ku xuseen xildhibaannada eedeeyay dowladda Federaalka aysan ahayn kuwo xaqiiqda ku saleysan.
Isagoo wareysi siinayay BBC-da ayuu fikirkiisa u cabiray sidan: “Waan ogay inay Kismaayo tageen, walina joogaan, xildhibaanno ka kala tirsan golaha shacabka iyo aqalka sare, laakiin haddey iyagu ku qanacsan yihiin waxa ka socda halkaas, micnaheeda ma aha in aqlabiyadda baarlamaanka ay ku qanacsan yihiin arrintaas, dowladdii dhexena wax ay ku qanacsan tahay ma aha, marka waxaan u arkaa aragti shakhsiyeed. Arrintan iyada ah sida loo sheegayo ma aha, sababtoo ah habkii wax loo dooran lahaa, ha ahaato odayaasha dhaqanka ama beelaha dadkii matalayay, wax heshiis lagu yahay ma aha, dadka meesha lagu xareeyay waxay u badan yihiin dad gacan ku rimis ah mana aha odayaashii dhabta ahaa”.
Mowqifka is khilaafsan ee xildhibaannada Federaalka, ayaa u muuqda inuu xaaladda sii cakirayo, xilli horayba ay taagneyd xiisadda ku saabsan doorashada Jubbaland.